Toy izao no fiasan'ny HomePod amin'ny Apple ID | Avy amin'ny mac aho
Toy izany no fiasan'ny HomePod amin'ny Apple ID anao
Mahita zavatra tsy fantatro momba ny HomePod foana aho ary izany hoe rehefa manokatra azy ianao ary manomboka mampiasa azy dia tsapanao fa ny asa mahafinaritra nataon'i Apple tamin'ity mpandahateny kely sy mahafinaritra ity. Efa nolazaiko anao ny zavatra voalohany tokony nianarako hatao, dia ny famerenana amin'ny laoniny ny HomePod ho any amin'ny toeran'ny orinasa. ary izany ve rehefa apetrakao amin'ny tamba-jotra WiFi, rehefa afindrao amin'ny toerana vaovao misy tamba-jotra WiFi hafa ianao dia mila amboarinao indray ny asany.
TSY mandeha ny HomePod raha tsy misy tambajotra WiFi tafiditra ary manao toy ny fitaovana hafa ankoatry ny iPhone, Mac na MacBook. Rehefa manao ny fanamboarana voalohany ho an'ny HomePod hanomboka miasa isika, ny tena ataontsika dia mampifandray azy amin'ny Apple ID.
Mazava ny momba azy Apple, tsy tiany hampiasaina tahaka ny mpandahateny hafa ny mpandahateny azy ary porofon'izany dia, ohatra, tsy azonao entina any an-tranonao eny amoron-dranomasina izany trano izany izay tsy anananao WiFi hifandraisana amin'ny Internet satria tranonao fialan-tsasatra io. Raha te hampiasa ny HomePod dia mila manana fifandraisana Internet ianao, satria raha tsy izany Siri amin'ny HomePod dia tsy afaka miasa ary satria ny mpanampy no mahatonga ny mpandahateny hiasa, dia hijanona tsy misy dikany daholo ny zava-drehetra.
Rehefa manamboatra tranokala WiFi miaraka amina tamba-jotra WiFi ianao, raha afindranao amin'ny tambajotra WiFi hafa izy avy eo, dia mampahafantatra anao izy fa manana olana amin'ny tambajotra WiFi misy ary mandeha amin'ny rindranasa Home amin'ny iPhone e ianao mba hanamboarana azy. Izany no antony raha mamindra azy amin'ny tambajotra WiFi vaovao ianao dia tokony hanaja ny HomePod araka ny efa nohazavaiko.
Ankehitriny, rehefa manamboatra ny HomePod ianao, avy amin'ny iPhone ohatra, ny tena ataonao dia tsy mampifandray ny HomePod amin'ny iPhone, iPad na Mac anao, ny ataonao dia mampifandray ny HomePod amin'ny ID foiben'ny Apple anao, izany no antony ilana izany. internet amin'ity dingana ity. Rehefa manana ny HomePod mifandray amin'ny Apple ID ianao dia hahazo mailaka avy amin'i Apple izay mampahafantatra anao fa ny fidirana amin'ny Apple ID dia vita avy amin'ny HomePod.
Rehefa tapitra ny fizotrany iray manontolo, na dia handao ny tranonao amin'ny iPhone-nao aza ianao, dia afaka manohy miasa ny HomePod ary afaka mangataka azy ireo ny fianakavianao hilalao hira iray. Tsy maintsy manadihady aho raha miala amin'ny trano ny iPhone Ny HomePod dia afaka mampiasa ny kalandrie na mamaky hafatra efa misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Toy izany no fiasan'ny HomePod amin'ny Apple ID anao
Ity no niandohan'ny feo fanombohana Mac fantatra amin'ny anarana hoe "Sosumi"
Shaxpir, fampiharana ho an'ny mpanoratra manampy amin'ny famoahana tena